China Aircraft type hole saw, woodworking hole saw, adjustable hole saw, stainless steel hole saw, bimetal hole saw, wood drill factory and manufacturing | Boda
Sitrana loaka karazana fiaramanidina, tsofa lavaka fametahana hazo, tsofa loaka azo ovaina, tsofa lavaka tsy misy vy, tsofa lozika bimetal, fitrandrahana hazo
BOSENDA voaroy maimaim-poana Cone saw / Wood drill. Ny fitaovana ampiasaina amin'ny hafanana, ny vatan'ny cutter dia manana fahombiazan'ny fifantohana avo lenta sy ny fanoherana mahery vaika mahery. Ny sisin'ny fanapahana dia vita amin'ny karbida simenitra avo lenta, izay manana ny mampiavaka azy amin'ny fanapahana maranitra, fihodinana miorina ary fandidiana haingana.
BOSENDA kitapo hazo / fandavahana hazo dia misy tsikera tsara momba ny tsena ary mitazona ny firaketana ho an'ny baiko mahazatra tsy miovaova avy amin'ny mpanjifa. Niezaka hatrany izahay nanao izay tsara indrindra fanavaozana ny kalitaon'ny vokatray na dia amin'ny antsipiriany kely aza, mba hahafeno tsara kokoa ny filan'ny tsena. Mino izahay fa ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatray dia fototr'izany hatrany amin'ny raharaham-barotra rehetra, mazava ho azy fa ny serivisy koa, fa ny kalitao no miteny farany. Noho izany, izahay, ekipa iray manontolo, dia niezaka hatrany nanao izay tsara indrindra vitantsika mba hanatsarana ny asanay sy hitazomana ny tenanay hiatrika fifaninanana amin'ny tsenan'ny fifaninanana.
Ity fitrandrahana kitay ity dia mety amin'ny fandavahana hazo plastika, tabilao gypsum, plywood ary fitaovana hafa. Ampiasaina betsaka amin'ny mpandahateny DIY, jiro, mpandrafitra, tabila plastika sns ... fitaovana vaovao amin'ny indostrian'ny haingon-trano io ary mety amin'ny latabatra fandavahana, milina fandavahana ary karazan-tsarimihetsika tanana elektrika maharitra rehetra, miaraka amin'ny lelan maranitra, ary ny fanesorana puce malefaka amin'ny fandidiana mora. Ny fanesorana ny puce effets effetive be, ny ampahany amin'ny vatana milamina, tsy mifikitra amin'ny antsy izany ary mahomby kokoa amin'ny fandavahana.
Ny lohan'ny fanapahana karbôna vita amin'ny simenitra, maranitra sy mateza, dia azo ampiasaina indray aorian'ny fikosoham-bary. Ny vy alika dia mafana loatra, ny refy dia marina sy azo ovaina, ary ny savaivony fanokafana dia azo ahitsy amin'ny halaviran'ny lohan'ny fanapahana mankany afovoany. Tanana hexagonal matevina, voafetra hisorohana ny fivezivezena. Mampiasà chuck mandritra ny 10mm sy ambony. Ny vokatra dia mety amin'ny fanodinana sy ny fanokafana fiasa amin'ny mora fitaovana toy ny malefaka takelaka, plywood, gypsum board ary aluminium gusset board.
Previous: 2020 Blade fanapahana fitaratra farany - Azo antoka, vy tsy mahazaka afo, fanidiana kaody fantsom-pifandraisana, karazana fiarovana rehetra - Boda
Manaraka: Sitrana lavaka beton, bitsika fandavahana fototra, tsofa lavaka, tsofa lavaka amin'ny rindrina, fitrandrahana beton